inona ny USB3.1 HUB? | Huachuang Electronic
Saha USB-C & USB 3.1
Fantaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny elanelana USB-C sy ny USB 3,1 hub. Inona ny fahasamihafana? Misy fahasamihafana ve? USB Type-C dia endrika mpampitambatra nampidirina tamin'ny taona 2015. Ny mpampifandray Type-A, izay efa ela, dia hosoloina Type-C. Ireo plugs ireo dia kely kokoa ary azo ampiasaina amin'ny andaniny roa - izay mety ho tombony lehibe indrindra. Aza mandinika akory ny fomba hidiran'ny plug ao anaty seranana - apetraho ao!
Famintinana ny tombotsoan'ny USB 3.1
indroa haingana araka ny USB 3.0
20x haingana kokoa noho USB 2.0
midina mifanaraka amin'ny USB 3.0 & USB 2.0 fitaovana
fifindrana herinaratra bebe kokoa (900 mA) - azo omena ny rakitra
Inona no hatao raha ny Mac na solosaina vaovao no manana mpampita Type C USB, fa ireo fitaovana farany fiafarany dia mbola USB 2.0 na 3.0? Na raha kely fotsiny ny plug plug?
Ny vahaolana dia antsoina hoe Hub-USB-C. Ny seranana USB dia safidy tsara hampiasa ny seranana USB 3.1 amin'ny Mac miaraka amin'ny karazana USB efa lehibe. Ireto manaraka ireto dia mihatra: ny fohy kokoa ny tariby hub sy ny fifandraisana kely aza dia misy ny tsara kokoa. Noho izany ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny hidirananao am-baravarana maromaro ho solon-drindrina fa tsy mampiasa takelaka misy slot maro. Ny habaka USB Type C 3.1 dia mamela ny fifandraisan'ny fitaovana maro miaraka amin'ny fifandraisana USB 3.0 na mihoatra noho ny fifandraisana USB Type-C amin'ny Mac sy solosaina na kahie. Ny fitaovana taloha dia azo tanterahina amin'ny haingam-pandeha toy izany, fa amin'ny hafainganam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha natao ho azy ireo ihany.
Ny mpampifandray USB-C ve mety amin'ny solosaiko taloha?
Tsia - tsy mifanaraka ny fampidirana USB-A na USB-B (Micro-USB) satria hafa tanteraka ny format.
Ny mpampifandray USB-A taloha ve dia mety amin'ny fitaovana USB-C vaovao?
Tsia - ny kely miditra amin'ny USB-C dia lehibe kokoa.
Miaraka ve ny Micro-USB sy USB-C?
Tsia - tsy mitovy ny endrika mpampitambatra.
Fitaovana USB 2.0 taloha dia tsy azo averina amin'ny alàlan'ny fampiasana azy amin'ny habaka 3.1 maoderina. Satria ny brake dia ny interface izay tsy manana fifandraisana ilaina ilazana ny SuperSpeed ​​+ eto. Tahaka ny fifindran'ny USB 2.0 mankany USB 3.0, ny USB 3.0 mankany USB 3.1 dia mihemotra manaraka. Ho elaela alohan'ny hametrahana ny fenitra USB-C ampiasaina amin'ny MacBooks dia afaka manao izany ny mpampiasa tsy misy adaptatera. Iaraha-mahalala tanteraka fa ny kojakoja novidina tamin'ny lasa dia mbola tokony ampiasaina.
Ny satroka USB C amin'izao fotoana izao
Manomboka amin'ny USB 1.0 hatramin'ny USB 3.1 - ny fivoarana tsy tapaka
Ny Universal Serial Bus (USB) dia nametraka ny tenany ho fenitra interface ary ny niandohany dia miverina lavitra amin'ny teknolojia informatika taloha. Tamin'ny 1996, ny dikan-tany tany am-boalohany 1.0 dia nahafahana nampifandray ireo fitaovana marobe, toy ny mpanonta, hard disks na scanner, tamin'ny alàlan'ny serasera fanamiana tsy mila mametraka karatra-marika SCSI lafo vidy amin'ny fotoana na tsy maintsy mividy ny mifanaraka aminy fitaovana farany. Ny dikan-tany tany am-boalohany dia nahafahan'ny tahan'ny famindrana hatramin'ny 1.5 na 12 MB / segondra. Ny dikan-teny 2.0 miaraka amin'ny anarana hoe Hi-Speed ​​dia mitondra fahaizana famindrana angon-drakitra 60 MB / faharoa tamin'ny 2000. Ny fenitra USB 3.0, valo taona taty aoriana dia niantso ny SuperSpeed ​​ny fisondrotry ny hafainganana famindrana ho 500 MB / segondra.
Ny fitaovana USB vaovao ve hiara-miasa amin'ny taloha?
Ny zavatra tsara mialoha: fitaovana USB 2.0 dia azo ampiharina amin'ny skan'ny USB 3.0 ihany koa. Midika izany fa, ohatra, ny takelaka fahatsiarovana izay misy seranan-tsambo USB 2.0 dia azo tanterahina amin'ny fantsom-pifandraisana USB 3.0 - na izany aza, misy ny olana amin'ny mpampitohy micro USB 3.0, satria somary lehibe kokoa ary manana tokonana ao amin'ny takelaka torolàlana . Tahaka ny USB 2.0, ny USB 3.0 dia miankina amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny fitaovana malemy. Na izany aza, tsy mandray ireo USB 3.0 plugs ny salan'ny USB 2.0 - izany dia noho ny fifandraisana.
Raha fintinina, dia midika izany:
Ny tariby USB 3.0 dia tsy mihemotra mifanohitra amin'ny fitaovana farany
Ny tariby USB 3.0 dia afaka mampifandray fitaovana USB 3.0 amin'ny mpampiantrano USB 2.0
Ny tariby USB 3.0 dia tsy afaka mampifandray fitaovana USB 2.0 amin'ny mpampiantrano USB 2.0
Ny tariby USB 3.0 dia tsy afaka mampifandray fitaovana USB 2.0 amin'ny mpampiantrano USB 3.0
Ny tariby USB 2.0 dia afaka mampifandray fitaovana USB 2.0 amin'ny mpampiantrano USB 3.0
Ny tariby USB 2.0 dia tsy afaka mampifandray fitaovana USB 3.0 amin'ny mpampiantrano USB 3.0
Ny tariby USB 2.0 dia tsy afaka mampifandray fitaovana USB 3.0 amin'ny mpampiantrano USB 2.0
Fenitra USB 3.1 sy ny mpampifandray USB Type-C vaovao
Compatibility, tariby sy conseur piozila - Ankehitriny USB standard 3.1 dia tokony hanome sary mazava. Miaraka amin'ny fiovan'ny USB 3.0 mankany USB 3.1, ny tariby fifandraisana vaovao dia ampidirina ao amin'ny fenitra USB vaovao: Ny mpampifangaro C dia manolo ny karazana fenitra taloha A ary azo ampidirina amin'ny andaniny roa. Dia manolotra haingam-pandeha haingana kokoa. Noho ny fanampian'ny takelaka USB, ny fitaovana USB 2.0 miasa amin'ny karazana konektor A dia azo ampiasaina koa amin'ny fifandraisana USB 3.1 miaraka amin'ny karazana konektor C ary ny mifamadika amin'izany. Na izany aza, misy ny olana amin'ny famatsiana herinaratra rehefa mampifandray ireo USB USB sy 3.1 amin'ireo port USB 2.0, satria ny USB 3.0 dia nampitombo ny 500 mA mankany 900 mA. Ny konandoha USB-C lahy dia lehibe kokoa noho ny teo alohan'ny Type A. Mihoatra ny 10 ny halavany
Apple dia manolo ny fifandraisana Thunderbolt amin'ny USB Type-C
Ny seranan-tsambo Thunderbolt izay novolavolain'i Apple sy Intel izay nampiasaina indrindra tamin'ny Apple Macs dia nosoloina tamin'ny 2015 tamin'ny slot C Type C miaraka amin'ny USB 3.1. Miaraka amin'ity interface ity dia afaka mampifandray ireo efijery. Tsy misy olana ho an'ny mpampita. Mbola tsy fantatra mazava na ny mpampitambatra karazana C miaraka amin'ny fenitra USB 3.1 dia ho lasa tariby fanamafisana ara-dalàna any Eropa. Tamin'ny volana martsa 2014, ny Parlemanta eropeana dia nandoa volavolan-dalàna izay hanome tariby fiampangana mahazatra ho an'ny fitaovana finday manomboka amin'ny taona 2017. Mandra-pahatongan'izany dia natao an-tsitrapo ny fifanarahana momba ny fenitra tariby fanamiana fanamiana - eto avokoa ireo mpanamboatra rehetra, ankoatry ny Apple. orinasa miaraka amin'ny tariby Lightning izay tsy manaraka fenitra rehetra ary mahandro ny lasopy manokana. Amin'ny tenany, ny mpampifandray USB Type C miaraka amin'ny USB 3.1 dia manana tombony tsara amin'ny fametrahana azy ho toy ny fenitra vaovao satria ny mpampitohy kely dia mamela fifandraisana haingana eo amin'ireo fitaovana ary mihatsara ny hafainganana. Ankoatr'izay, ny mpampitohy Type C dia mampihena ny fidiran'ny tariby USB, satria afaka manolo ny karazana konektor USB rehetra taloha fa tsy noho ny hafainganan'ny fifandraisana, fa koa amin'ny 900 mAh amin'izao fotoana izao.